1. စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းလေ့လာရေးခရီးစဉ်စီစဉ်ခြင်း (ပုဂ္ဂလိက/အဖွဲ့)
2. လုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်ခြေစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း(ဈေးကွက်စစ်တမ်း၊မြန်မာလုပ်ငန်းများနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း၊သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့တွေ့ဆုံခွင့်စီစဉ်ခြင်း
3. တီဗွီသတင်းအစီအစဉ်၊စာနယ်ဇင်းများအတွက် ရိုက်ကူးရေးစီစဉ်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း
4. လုပ်ငန်း၏ဥပဒေဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လိုင်စင်ယူခြင်း၊ စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်ခြင်း
6. နေထိုင်မှုအတွက်စီစဉ်ခြင်း(တည်းခိုနေထိုင်ရေး၊သွားလာနေထိုင်မှုအတွက်လိုအပ်သော အချက်အလက်တင်ပြခြင်း）
ဂျပန်/မြန်မာ စကားပြန်ပုံစံမျိုးစုံကို လက်ခံစီစဉ်ပေးပါသည်။ (တချိန်တည်းပြန်ဆိုခြင်း/ အပိုင်းခြား၍ပြန်ဆိုခြင်း၊တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြန်ဆိုပေးခြင်း၊ တစ်ဦးတည်းသီးသန့် တီးတိုးပြန်ဆိုခြင်း
စီးပွါးရေးကိစ္စဆွေးနွေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး၊ စီးပွါးရေးကိစ္စလေ့လာခြင်း၊လုပ်ငန်းခရီးစဉ်အတူသွားခြင်း၊စက်ရုံများလေ့လာခြင်း၊ Presentation ၊ တီဗွီရိုက်ကူးခြင်း၊အင်တာဗျူး၊ဒေသတွင်းစစ်တမ်းကောက်ခြင်း၊ အခမ်းအနားအစုအဝေးများအတွက်အစီအစဉ်တင်ပြသူတာဝန်ယူခြင်း
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ငွေကြး၊ စက်မှု၊လက်မှုပညာ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကြော်ငြာ၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ဥပဒေရေးရာ၊ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရေး/လုံခြုံရေး၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အကူအညီ၊ ၊ လှုဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးခိုလှုံမှု၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ သိပ္ပံပညာ၊
စာချုပ်စာတမ်း၊သဘောတူစာချုပ်၊ စီးပွါးရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲသုံးပါဝါပွိုင့်ဖိုင်များ၊ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအမေးအဖြေများနှင့် အခြားအရေးအသားများ
မော်တော်ယာဉ်မျိုးစုံ(ဆီနှင့်ယာဉ်မောင်းအပြီးအစီး)ကို ငှါးရမ်းခြင်း၊ မြို့တွင်း/နယ်များနှင့် ခရီးသွားများလည်ပတ်သည့်နေရာများသွားရောက်နိုင်ရန်အတွက်စီစဉ်ပေးသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပလေယဉ်လက်မှတ်အပါအဝင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းခရီးစဉ်အတွက်လိုအပ်သော ခရီလမ်းဆက်သွယ်ရေး ကိုစီစဉ်ပေးပါသည်။
လိုအပ်ချက်ကိုလိုက်၍ ဘာသာစကား(ဂျပန်/မြန်မာ)၊ Business Manner ၊ ရုံးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများကို မှာယူသည့်အတိုင်းသင်တန်းပေးနိုင်ပါသည်။ သင်တန်းဆရာပို့ပေးရန်စီစဉ်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းရှာဖွေခြင်း၊ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့Poh Pay Mel Office Supplier 2U မှလူကြီးမင်းတို့၏ ရုံးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်‌သော
1. စာ‌ရေးကိရိယာများ (စာရွက်၊စာအိတ်မှအစ Stapler, Staples များအထိ)
2. ဖိုင်များ (L File, Clip File [1 Clip,2Clip], Zip File များမှအစ Box File ဆိုဒ်အမျိုးမျိုးအထိ)
3. တိပ်များ (Sello Tape, Double Tape, Vinyl Tape များနှင့်တိပ်အမျိုးမျိုး)
4. လက်‌ဆေးဆပ်ပြာနှင့်ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုး (Hand Soap များနှင့် ELAN ဆပ်ပြာအဆီများ၊အခြားဆပ်ပြာများ)
5. ရုံးခန်းနှင့်အ‌ဆောက်အဦးသန့်ရှင်း‌ရေးအတွက် အသုံးပြုရ‌သော သန့်ရှင်း‌ရေးသုံးပစ္စည်းမျိုးစုံ (Floor Cleaner, Bathroom Cleaner များ၊ ကြမ်းတိုက်တံနှင့် Refill များ၊ ‌ဖော့တုံးများ၊ တစ်ရှူးအမျိုးမျိုး၊ Glass Spray နှင့် Air Fresher များ၊ Insect Killer များ)
6. ဖုန်း‌ငွေဖြည့်ကဒ်အမျိုးမျိုး (MPT, Telenor, Ooredoo )
7. IT Accessories များ (Keyboard, Mouse, USB Stick, Memory Card, CD, DVD, CD Bag များ)
8. အသင့်စား စား‌သောက်ကုန်များ (Coffee Mix, Tea Mix , သကြား၊ နို့မှုန့်၊ ‌ကော်ဖီမှုန့်၊ လက်ဖက်‌ခြောက် တံဆိပ်မျိုးစုံ၊ ဘီစကစ်၊ ကွတ်ကီး၊ Lotte Pie စသည့် မုန့်မျိုးစုံ)
9. တစ်ခါသုံးခွက်များ၊ ဇွန်းများကို
Door to Door စနစ်ဖြင့်ဝန်‌ဆောင်မှု‌ပေး‌နေပါပြီ။
လူကြီးမင်းတို့အ‌နေဖြင့် စာ‌ရေးကိရိယာနှင့် ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် အချိန်၊‌ငွေနှင့်လုပ်အားအရင်းအမြစ်များ နစ်နာရမှုကို သက်သာ‌စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်‌ဆောင်မှုမှ ကူညီ‌ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
အမြဲပိတ်‌နေ‌သောကားလမ်းတွင် လိပ်ကိုဘရိတ်တပ်သွားရသကဲ့သို့ ကားဘီးကိုတလိမ့်ချင်းလှိမ့်ပြီး ကိုယ်တိုင်သွား‌ရောက်ဝယ်ယူမည့်အစား ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်‌ဆောင်မှုကို စမ်းသပ်အသုံးပြုရန် ဖိတ်‌ခေါ်ပါသည်။
မြန်မာ မြန်မာကောင်းသုတ ကုမ္ပဏီလီမိတက်
+95 45000 3837
အလုပ်ချိန် ။ ။ 09:00～17:00
အီးမေးလ်။ ။ info.mmgk@gmail.com (ဂျပန်ဘာသာ ဖြင့်လည်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။)
ဂျပန် Pale Pale Co., Ltd（http://www.palepale.com/）
အီးမေးလ်။ ။ info@palepale.com